Ansible ကဘာလဲ? ဘယ်လို Ansible အလုပ်လုပ်?
ဘယ်လို Ansible အလုပ်လုပ်?
Ansible အတော်လေးအသစ်ဖြစ်၏ devops tools တွေ ရုပ်သေးနှင့်စားဖိုမှူးထားပြီးဈေးကွက်ထဲမှာကစားသမားထူထောင်ခဲ့ကြသည်ပြီးနောက်ကြောင့်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ဒါဟာအိုင်တီအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်အလိုအလျောက်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းမှတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားချဉ်းကပ်မှုရှိပါတယ်။ Ansible ၏မူလစာရေးသူကအခြေခံအဆောက်အအုံလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့, သင် programming သင်ယူဖို့လိုအပ်မဖြစ်သင့်သောရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူပြုလုပ်ဖန်တီးခဲ့သည်။ စီမံခန့်ခွဲခံရဖို့လိုဝေးလံခေါင်သီသောဆာဗာချိတ်ဆက်ရန်, ansible ပြတင်းပေါက်အခြေစိုက်စနစ်များများအတွက် * nix based စနစ်နှင့် winrm (ပြတင်းပေါက်ဝေးလံသောစီမံခန့်ခွဲမှု) အတွက် ssh ကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ။ T က
Ansible သင်တန်း ရိုးရှင်းကြော့, အရွယ်မှာနှင့်သင်ယူရန်လွယ်ကူလို့ယူဆတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖျော်ဖြေခံရဖို့ညွှန်ကြားချက် / ခြေလှမ်းများ / တာဝန်များကို၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ Yamla။ Tasks ကိုဆင့်ကဲကွပ်မျက်ခံရနေကြသည်။ တာဝန်ထဲမှာကျနော်တို့စနစ်၏ပြည်နယ်ကြေညာရန်လိုအပ်သည်။ eg: vim ကို install ထားရမည်တဲ့အထုပ်။ က install လုပ်ဖို့င်မည်သို့သော module တစ်ခုကစီမံခန့်ခွဲ / ကိုင်တွယ်မယ့်ကျနော်တို့ကအကြောင်းသိပ်စိတ်မပူရန်မလိုပါ။ ကြောင်းအထုပ်ပြီးသားကို install လျှင်, ansible ရိုးရိုးကြောင်းခြေလှမ်းကိုလျစ်လျူရှုပါလိမ့်မယ်။ ဤသည် Idempotence အဖြစ်ဟုခေါ်သည်။
YAML ကလွယ်ကူသောဖတ်ပါနှင့်လူသားအဖြစ်စက်တွေများအတွက်နှစ်ဦးစလုံးရေးသားဖို့အကြောင်း, လွယ်ကူရိုးရှင်းသည့် text format ကိုပါပဲ။ ansible မောင်းသောမှော် module တွေအဖြစ်ကိုခေါ်တစ်ခုခုအတွက်တွေ့ကြုံတတ်၏။ modules ဆို programming language ကို၌ရေးထားလျက်ရှိ၏နိုင်ပါသည်။ Ansible အတော်လေးမြန်ခြင်းနှင့်ပစ်မှတ် server ပေါ်မှာ install လုပ်ဖို့ဆိုအေးဂျင့်မလိုအပ်ပါဘူး။ သငျသညျကိုပငျတစျဦးရဲ့အကထောက်ပံ့ကြောင်း, Router က / switches များကို configure ansible ကိုသုံးနိုင်သည် Ansible (ကအတော်လေးစာရင်းတစ်ခုဖွင့်) ။
သင်အမှန်တကယ်နက်ရှိုင်း Ansible သို့တူးနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ထုံးစံ module တွေဖန်တီးဖို့လိုတယ်ဆိုပါက, သာထို့နောက်သင်တစ်ဦး programming language ကိုသင်ယူသို့မဟုတ်သိရန်လိုအပ်သည်။
နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ Ansible ၏အကျိုးကျေးဇူးများကို ကအခမဲ့ open source င်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါဟာ Python ကို၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ရဲ့ Python နှင့်နားလည်သောသူဘယ်သူ့ကိုမှ code ကိုဖတ်ပါနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်လျှင်ပြုပြင်နိုင်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းအားဖြင့်လူကြိုက်များနှင့်ကလေးမွေးစားခြင်းအားဖြင့်စီရင်တော်, Redhat 2015 အတွက် Ansible ဝယ်, ယခု Redhat ရဲ့ပူဇော်သက္ကာကိုတရားဝင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ansible နေဆဲအခမဲ့ open source ဖြစ်ပြီးစိတ်ပူမနေပါနဲ့, Redhat နောက်ထပ်, တိုးမြှင့် code ကိုပံ့ပိုးနှင့်ဤစီမံကိန်းကိုကြီးထွားလာနေပါတယ်။ Redhat Ansible မျှော်စင်လို့ခေါ်တဲ့ web based GUI ကိုပလက်ဖောင်းကမ်းလှမ်းကြောင့်ကျနော့်အမြင်အတွက်ပေးဆောင်ခြင်းနှင့်အတော်လေးစျေးကြီးပါတယ်။ ဒါက Redhat Ansible အပေါ်ငွေရှာမည်သို့ပါပဲ။ Ansible မျှော်စင်ကောင်းသော analytics နှင့်အစီရင်ခံစာများနှင့် CMDB / စာရင်းနှင့်အတူတစ်ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲမှုပေးသည်။
Ansible ပြောင်းလဲမှုစီမံခန့်ခွဲမှုမှာကောင်းလှ၏, Automation, နေရာချထားခြင်းနှင့် orchestral ။ ဒီတစ်ခု tool ကိုအတူသင်သည်သင်၏ဆာဗာများအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်သင့် application များစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါ။ ဒါက capistrano, ထည်စတာတွေနဲ့တူမဆိုလျှောက်လွှာသီးခြားဖြန့်ကျက် tools တွေကိုသင်ယူဖို့မလိုအပ်ဆိုလိုတယ်
Gurgaon အတွက် Ansible လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး